Badweynta Hindiya - Wikipedia
Coordinates: 20°S 80°E﻿ / ﻿20°S 80°E﻿ / -20; 80
Kani waa maqaal ku saabsan biyaha badweynta Hindiya ee badaha dhulka. adeegsi kale, eeg Badweynta Hindiya (faah faahin).
w:es:indian ocean w:tr:Hint altkıtası w:it:Oceano Indiano Badweynta Hindiya (Af Ingiriis : Indian Ocean; Af-Carabi: المحيط الهندي‎) waa badweynta sadexaad ee ugu wayn aduunka taasi oo dhacda bariga qaarada Afrika, koonfurta Aasiya ilaa galbeedka Badweynta Atlaantik. Badweynta Hindiya waxay ka mid tahay baddaha aduunka ugu waaweyn waxaayna u dhaxeysaa qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Ustareliya. Baaxada Badweynta Hindiya waxaa lagu qiyaasaa 73.481.000 km². Waxay ku xirantahay waqooyiga-galbeed, Marinka Gardafuul. Xudduudaha Badweynta Hindiya, oo ay soo diyaarisay Ururka Caalamiga ah ee Hormarinta Caalamiga ah 1953-kii, waxaa ka mid ahaa Badweynta Koonfureed laakiin maaha badaha xeebaha ee waqooyiga woqooyiga, laakiin sannadkii 2000 ayaa IHO waxay gooni u goosatay Badweynta Koonfureed si gooni ah, taas oo soo saartay biyaha koonfurta of 60 ° S badweynta Hindiya, laakiin waxay ku jireen xeebaha badweynta waqooyiga.  Meridionally, Badweynta Hindiya waxaa laga soo xigtay Badweynta Atlantic by 20 ° bariga Meridian, koonfurta koonfurta Cape Agulhas, iyo Badbaadada Baasifiga by meridian of 146 ° 55'E, koonfurta ka soo xigta koonfurta ugu fog ee Tasmania. Inta u dhaxaysa waqooyiga badweynta Badweynta Hindiya qiyaastii 30 ° waqooyiga Gacanka Ciraaq.
Badweynta Hindiya waxay daboolaysaa 70,560,000 km2 (27,240,000 sq mi), oo ay ka mid yihiin Badda Cas iyo Gacanka Ciraaq, laakiin ka baxsan Badweynta Koonfureed, ama 19.5% Bada Dunida; Miisaankeedu waa 264,000,000 km3 (63,000,000 cu mi) ama 19.8% mugga caalamka; waxay leedahay qoto dheer celcelis ahaan 3,741 m (12,274 ft) iyo qoto dheer oo ah 7,906 m (25,938 ft). 
Xaafadaha badda ee badweynta ayaa ah cidhiidhi, oo qiyaastii 200 kiilomitir (120 md) ballaaran. Marka laga reebo waxaa laga helaa xeebta galbeed ee Australia, halkaas oo xajmiga shinninku uu ka badanyahay 1,000 kiiloomitir (621 mi). Celceliska qoto dheer ee baddaha waa 3,890 m (12,762 ft). Mawduuca ugu sarreeya waa Diamantina Deep in Diamantina Trench, 8,047 m (26,401 ft) oo qoto dheer; Sunda Trench waxay leedahay qoto dheer oo ah 7,258-7,725 m (23,812-25,344 ft). Waqooyiga 50 ° ee koonfurta, 83% ee basin weyn ayaa daboolaya saameeyaha pelagic, kuwaas oo in ka badan kala badh uu yahay globigerina. Qeybta 14% ee ku hartay waxaa lagu dhajiyay qulqulka dhulalka. Dhaqdhaqaaqa maskaxdu waxay ku badan yihiin dhul-beereedka koonfureed.
Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka mid ah Bab el Mandeb, Strait of Hormuz, Lombok Strait, Strait of Malacca iyo Strait Strait. Seas waxaa ka mid ah Gacanka Cadmeed, Badda Carabta, Badda Carabta, Bay of Bengal, Great Australian Bight, Badda Lacadis, Gacanka Mannar, Mozambique Channel, Gulf Oman, Persian Gulf, Badda Cas iyo agabyada kale ee biyaha. Badweynta Hindiya waa mid si toos ah ugu xidhan badda badda Mediterranean iyada oo loo marayo Suez Canal, taas oo laga heli karo Badda Cas. Dhammaan badaha Badweynta Hindiya waxay ku yaallaan Khamriga Bari ee Bariga dhexe, bartamaha
Sida ugu yar ee ugu weyn ee badda,  badweynta Hindiya waxay leedahay faafin firfircoon oo ka mid ah hababka caalamiga ah ee baaskiillada badhtamaha. Waddamada Badweynta Hindiya kuwan soo fuulaya Rodrigues Triple Point oo leh Central Indian Ridge, oo ay ku jiraan Carlsberg Ridge, oo ka soocaya Qeybta Afrika ee laga soo galo Hindiga Hindiya; Koofurta Hindiya ee Koonfur-Galbeed oo ka soocaya Xagga Afrika ee laga soocay Qeybta Antarctic; iyo Koonfur-bari Indian Indian ah oo ka soocaya Qaybta Australiya oo ka soo jeeda Warshadda Antarctic. [Xariiqa loo baahan yahay] Xarunta Dhexe ee Central Ridge waxay ku socotaa waqooyi inta u dhexeysa inta u dhaxaysa Jasiiradda Carabta iyo Afrika ee Badda Mediterranean.
Taxane taxane ah iyo silsilado isdabajoog ah oo ay soo saarto hotspots waxay ka gudbaan Badweynta Hindiya. Réunion hotspot (firfircoon 70 ilaa 40 milyan oo sano ka hor) ayaa isku xira Réunion iyo Mascarene oo ku yaalla Chagos-Laccadive Ridge iyo Trascan Traps ee waqooyiga galbeedka Hindiya; Xerada Kerguelen (100-35 malyan sanno ka hor) waxay isku xirtaa jasiiradaha Kerguelen iyo Kerguelen oo ku yaalla Nines East Ridge iyo Rajmahal Traps ee waqooyi-bari Hindiya; Goobta Marion (100-70 Milyan sanno ka hor) waxay suurtagal noqon kartaa inay xiriir la sameyso Prince Edward Islands oo ku taal Eighty Five East Ridge.  Meelaha hotspot ah ayaa la jebiyey by Waxaa ka mid ah xeebaha kulaylaha ah, badweynta Hindiya ee Hindiya waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee la isku daro phytoplankton ee xagaaga, sababtoo ah dabaylaha monsoon ee adag. Dabayshu waxay ku qasbaysaa in ay keento xayiraad xoog leh oo xeebta iyo furan, taas oo soo saarta nafaqooyinka meelaha aagga sare halkaasoo iftiin ku filan oo loo heli karo sawirradu iyo waxsoosaarka phytoplankton. Phytoplankton Blooms waxay taageertaa nidaamka badda badda, oo ah saldhigga shabakadda cuntada badda, iyo ugu dambeyntii noocyada kalluunka ee waaweyn. Badweynta Hindiya waxay u dhigantaa qaybta labaad ee ugu weyn dhaqaalaha qiimaha dhaqaale ee ugu qiimaha badan  Kalluunkeeduna waa mid muhiimad weyn u leh waddamada xuduudaha u ah isticmaalka gudaha iyo dhoofinta. Kalluumaysiga kalluumeysiga ah ee ka yimaada Ruushka, Japan, Kuuriyada Koonfureed, iyo Taiwan ayaa sidoo kale ka faa'iideysanaya Badweynta Hindiya, ugu badnaan geedka iyo tuunbada. 
Cilmi baaris ayaa muujinaysa in kor u kaca heer-badeedka badweynta ay qaadaan qariidad ku saabsan habka badda badda. Daraasad ku saabsan isbedelada Phytoplankton ee Badweynta Hindiya waxay muujinaysaa hoos u dhac ku yimid ilaa 20% khadka fytoplankton ee Badweynta Hindiya, lixdii sano ee la soo dhaafay.  Qiimaha tuunida ayaa sidoo kale hoos u dhigay hoos u dhaca qarnigii la soo dhaafay, taas oo ay ugu wacan tahay kor u kalluumeysiga warshadaha, iyada oo kuleylka ogu kululeynayo dareen dheeraad ah oo ku saabsan noocyada kalluunka.
Noocyada badda ee khatarta ah waxaa ka mid ah qoryaha, sealadaha, dhoobada, iyo xajmiga. 
Qeybta qashinka ee Badweynta Hindiya ayaa la helay sanadkii 2010 kaas oo ka koobnaa ugu yaraan 5 milyan oo kiilomitir oo isku wareeg ah (1.9 malyan oo mayl laba jibaaran). Koontaroolka Koonfureed ee Hindiya, Guryahaasi waxay si joogto ah u dhexdhexaadinayaan Badda Australia ilaa Afrika, waxay hoos u dhigeen Mozambique Channel, waxayna ku noqdeen Australia mudo lix sano ah, marka laga reebo burburkii burburay ee aan ku dhicin xarumaha geyre . [loo baahan yahay]
Sannadka 2016, cilmi-baarayaasha Ingiriiska ee ka socda Jaamacadda Southampton waxay ogaadeen lix nooc oo xayawaan ah oo cusub oo ku yaala badweynta Hindiya. Noocyada cusubi waxay ahaayeen "Hoff" cusbooneeysi, "suuf", "suuf", suuf la mid ah, kareem, xajmiga duufaanka iyo duufka polychaete
Taariikhda Badweynta Hindiya waxaa lagu tilmaamaa ganacsiga badda; dhaqanka iyo suuq-geynta ganacsigu waxay u badan tahay inuu dib u soo celiyo ugu yaraan toddoba kun oo sano.  Inta lagu jiro muddadan, isgaadhsiinta madax-bannaan, gaaban fog ee isgaadhsiinta oo ay weheliso xudduudaha cirif-dhigga ah ayaa loo beddelay shabakad isku xiran. Shabakada shabakadani ma ahan mid lagu guulaysto ilbaxnimo dhexe ama mid sare, balse waa isweydaarsi maxalli ah iyo isbeddel goboleed ee Gacanka Bari, Badda Cas iyo Badda Carabta. Dhererka sare ee Ubaid (2500-500 BCE) ayaa laga helay buluugga Gacanka ee Dilmun, maanta oo ah Bahrain; raadadka isdhaafsiga u dhaxeeya xaruntan ganacsiga iyo Mesopotamia. Sumerian wuxuu ka ganacsan jiray hadhuudh, dherer, iyo dhumuc (oo loo isticmaalo doomaha cawska) ee naxaas, dhagax, geedo, maqaar, taariikh, basasha, iyo luul. Maraakiibta xuduudaha ee xuduudaha ah waxay u gudbiyeen alaabo u dhaxeeya ilbaxnimada Harappa (2600-1900 BISHKI) ee Hindiya (casriga casriga ah ee Pakistan iyo Gujarat ee Hindiya) iyo Gacanka Ciraaq iyo Masar.
Periplus ee Badda Erythraean, oo ah hoggaamiyaha Alexandria ee adduunka ka baxsan Badda Cas - oo ay ku jiraan Afrika iyo Hindiya - laga bilaabo qarnigii koobaad ee Aasaasiga ah, ma aha oo keliya aragtida ganacsiga ee gobolka, laakiin sidoo kale waxay muujinaysaa in badmaaxiinta Roomaanka iyo Giriigta ay horeba u barteen aqoonta dabaylaha monsoon.  Heshiiska mugdiga ah ee Madagascar ee ay sameeyeen hubiyeyaashu waxay muujinayaan in xuduudaha xuduudaha badaha ee Badweynta Hindiya ay labaduba yihiin kuwo si fiican u degan oo si joogto ah ugu dhexmaray waqtigan. Inkastoo mooshinka waa in uu aqoon u yeeshay Badweynta Hindiya qarniyo badan. 
Dhaqanka hore ee dunida ee Mesopotamia (laga bilaabo Sooma), Masar hore, iyo Hindida Hindiya (oo ka bilowda ilbaxnimada Indus), oo ka bilaabmay dooxooyinka Tigris-Yufrates, Niil iyo Indus siday u kala horreeyaan, Badweynta. Dhaqameedyada ayaa si dhakhso ah uga kacday Faaris (laga bilaabo Ceel) iyo kaddibna Koonfurta Aasiya (laga bilaabo Faanaan).
Intii lagu guda jiray ciidankii ugu horreeyay ee Masar (3000 BCE), badmaaxayaasha ayaa loo diray biyaha, iyagoo u safraya Punt, oo loo maleynayo inay qayb ka yihiin maanta Soomaaliya. Maraakiibta soo laabtay waxay keeneen dahab iyo malmal. Dhaqdhaqaaqa badda ee ugu horeeyay ee u dhaxeeya Mesobotamiya iyo Hindu-Indus (oo ah 2500 CH) ayaa lagu qabtay xeebta Badweynta Hindiya. Fikrado badan oo ka tirsan dabayaaqadii 3-da sano ee BCE ayaa laga yaabaa inay soo galaan aagga, laakiin ma jirin degsiimo.
Biyaha Badweynta Hindiya ayaa furay aagagga xuduudaha u ah ganacsiga ka hor inta aaney Atlantic ama Pacific Ocean. Meelaha xoogga leh ayaa sidoo kale loola jeeday maraakiibta si sahal ah u dhoofi kara galbeedka horraantii xilliga xagaaga, ka dibna dhowr bilood sug oo soo noqo bari. Tani waxay u oggolaatay dadyowga reer Indonesia in ay ka gudbaan Waxaa darasadaan idiin surta galiyey Ina akhristan mudane Cawil Aden Ali .
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Badweynta_Hindiya&oldid=225968"
Last edited on 7 Diseembar 2021, at 15:25
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 7 Diseembar 2021, marka ee eheed 15:25.